Somaliland.Org » Jawaab: Somalidu ma sidan bay ahayd ? ee wardheernews
OPINIONJawaab: Somalidu ma sidan bay ahayd ? ee wardheernews
December 29th, 2007 Comments Off Horta akhristoow maxaad ka taqaan wardheernews?. Bal intaynaan u galin jawaabta maqaalka magaciisu dusha sare ku qoran yahay ee Mareegta wardheernews ku soo baxay 28 dec, 2007 uuna qoray, ninka magaciisa ku sheegay, Ismaaciil C, Xasan (khaliil) aan wax yar iska waydiino mareegtan iyo waxay u taagan tahay. wardheernews waa mareeg loo sameeyay ujeedo kali ah, ujeedadaasi oo ah inay geed dheer iyo ku gaabanba u fuusho siday u ceebayn lahayd qaranka Somaliland! iyadoo talaabooyinkan hoose qaadaysa,- b. Qorista iyo faafinta been-abuuro, masabidyo iyo xumaan ka dhan ah, jiritaanka qaranka Somaliland iyo dadkiisa, waxa cadaynteeda taa kaaga filan, inad waxoogaa yara mildhato magacyada sheekooyinkay soo daabacaan. t. Aflagaadayn iyo cay qofkii Somaliland wax wanaag ah ka sheega, ama somaliland dadkeeda iyo dalkeeda qiimo u leh.
- Bal malee! Somaliland oo loo soo mutay waxaa dusha aad ku malaysay iyo waxyaalo kale oo badan, inay tahay beerkii qadada lagu sugayay, iyo inay tahay dhuloow kaama kaco. Labada midka ay tahay nin rag ahi waa garanayaa nin kalena looba sheegi maayo. Aan hadaba isku malmalo maqaalka magaciisu yahay '' Somalidu ma sidan uun bay ahayd ''. Jawaabta su' aashani waa '' Muruqa laba Suul ninba si ku ah'', ninkii wax dheeri ah ku qabay Soomaalinimadii hore iyo soomaaliyadii duntay, sida hada ay tahay way ka degi la' dahay, waayo sadkii dheeriga ahaa ee uu qabay baa uu waayay! ninkii kasta ee kale-se dhadhan kalay u leedahay, bal kolay anigu tayda iyo kuwa ila midka ah baan tooda ka war